Fri, Jun 7th, 2013 :
सन् १९९३ को कुरा । म कक्षा ९ मा पढ्थेँ र धोबीघाटस्थित छात्रावासमा बस्थेँ । छात्रावासमा एउटै क्लासमा पढ्ने पाँचजनाको समूह थियो हाम्रो । नाम हामीले आफैं जुराएका थियौं- ‘द फेमस फाइभ’ । बेलायती बालसाहित्यकी लेखक एनिड ब्लाइटनको रोमाञ्चक उपन्यासको सिरिज द फेमस फाइभबाट प्रभावित भएर हामीले आफैंलाई ‘फेमस फाइभ’ भनेर घोषणा गरेका थियौं । सन् १९९३ को कुरा । म कक्षा ९ मा पढ्थेँ र धोबीघाटस्थित छात्रावासमा बस्थेँ । छात्रावासमा एउटै क्लासमा पढ्ने पाँचजनाको समूह थियो हाम्रो । नाम हामीले आफैं जुराएका थियौं- ‘द फेमस फाइभ’ । बेलायती बालसाहित्यकी लेखक एनिड ब्लाइटनको रोमाञ्चक उपन्यासको सिरिज द फेमस फाइभबाट प्रभावित भएर हामीले आफैंलाई ‘फेमस फाइभ’ भनेर घोषणा गरेका थियौं ।
साथीहरुले त्यो केटा को हो भनेर प्रितीलाई सोधे । सोध्न त मलाई तिनीहरुभन्दा अगाडि नै मन थियो । अर्कै अर्थ निस्केला भन्ने डरले लजाएर खुम्चेझैँ गरेँ । साथीहरुको जिस्काजिस्की र ही…हा अलि सामसुम भएपछि प्रितीले बल्ल ‘डेड्ली’ कुराको कुटुरो फुकाई, ‘शिवालाई मेरो भाइले मन पराउँछ ।’ प्रितीका पाँचजना दिदीबहिनी मात्र थिए, भाइ कताबाट आयो ? साथीहरुले अचम्म माने । ‘मेरो कजन भाइ पर्ने क्या,’ हामीले नपत्याएपछि उसले भनी । ‘ऊ त्यही घरमा बस्छ’ भन्दै उसले हामी पढिरहेको डाइनिङ हलबाट देखिने पारिको हरियो घर देखाई । पर्खालबाहिरको गतिविधिमा जति चासो दिए पनि त्यति नजिक ठडिएको हरियो घरबाट हामीलाई हेरिरहने कुनै केटाको भेउ त्यस बेलासम्म पाउन सकेका थिएनौं । आँखा तन्काएर हामीले एकपटक उतै हेर्‍यौं ।
मैले स्थितिको गम्भीरतालाई गमेँ र लौ त भनिदिएँ । मलाई आफ्ना लागि भन्दा पनि मेरा साथीहरुका लागि लभ गरिदिएजस्तो लाग्न थाल्यो । त्यस दिन स्कुल त गइयो । तर पूरै अर्कै चालढाल र रंगरोगनमा । स्कुल जाने लाइनमा हिँड्दा ढुंगाको फुटबल नखेली हिँडिरहेँ । लाग्यो, केटोले मलाई कतैबाट नियालिरहेको छ । बेसरी तन्काएर काटेको कपाल निधारमा छोटो हुन गएछ । माधुरी दीक्षितको जस्तो लर्कनुपर्ने जुल्फी, कुखुराको चल्लाको कपालझैँ फुरुर्र भयो । निधारमा फुर्फुराउने कपालले घरीघरी झर्को पनि लगाउँथ्यो । तर राम्रो देखिनुपर्ने बाध्यता थियो । म प्रत्येक कक्षापछि शौचालय जान्थेँ र जुल्फीलाई पानीले भिजाएर आउँथेँ । नम्बर ‘एट’ र म एउटै कक्षामा थियौं । ऊ घरीघरी पल्लो कुर्सीबाट मतिर आँखा पसार्थी । र, देख्थी मलाई कताकता हराइराखेको । साढे चार बज्ने पर्खाइमा मैले आठवटा कक्षा दिवास्वप्न हेरेर नै बिताएँ । स्कुल साढे तीन बजे छुट्टी भयो । हामी चार बजे छात्रावास पुग्यौं । साथीहरुको आग्रहमा मैले सेतो कुर्ता-सुरूवाल लगाएँ र साढे चार बजे रोटे पिङनिर पुगेँ । साथीहरु अपरेसन ‘आँखा-चार’लाई सफल बनाउन सेन्ट्रीमा तैनाथ भए ।
उनीहरुले मेट्रन, आया दिदी र अरु सिनियर दिदीहरुलाई निगरानी गर्न थाले ।
‘हो र भन्या ? मलाई त ….,’ मैले मुख बिगार्दै भनेँ । तर मेरो मन नपराइ मेरा प्यारा साथीहरुले पढ्न सकेनन् वा पढ्न चाहेनन् । मैले आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरु आशिषको लम्बाइको चर्चामा जुटे । ‘पाँच पाँच कि पाँच छ ?’ केटाको हाइटसँग अलि बढी नै लगाव भएकी हामीभन्दा अग्ली नम्बर ‘एट’ अनुमान लगाउन थाली । टुप्लुक्क पि्रती आइपुगी, मुस्कुराउँदै । हामी बसेको टेबलमा बस्दै सोधी, ‘कस्तो लाग्यो त ?’ साथीहरुले उसको मुस्कान सापटी लिएर मुसुमुसु हाँस्दै मलाई हेरे । म भने अलि कूटनीतिक प्रतिक्रिया फुराउनुपर्‍यो भनेर कपाल कनाउन थालेँ । पि्रतीको मुखेन्जी आशिषको अनुहार मन परेन भन्न त भएन । भनेँ, ‘म भन्दा कान्छोलाई कसरी लभ गर्ने ? मलाई त भाइभाइजस्तो फिलिङ्स आइराछ ।’ ‘प्लिज शिवा, एभ्री थिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार ।’ नम्बर सेभेन्टिनले अटोबुकमा भर्ने गरेको ‘क्लिसे’ दोहोर्‍याई ।
Santosh wrote on 2013-06-09,
Mero pani yestai yestai love story cha.... chapi dine ho?